Cilmi Baaris Lagu Sameeyay Quraanshadda iyo Nolosheeddai yo Mucjisada Qur,aanka Kariimka
Loading...	Home Maqaallo Cilmi Baaris Lagu Sameeyay Quraanshadda iyo Nolosheeddai yo Mucjisada Qur,aanka Kariimka
Cilmi Baaris Lagu Sameeyay Quraanshadda iyo Nolosheeddai yo Mucjisada Qur,aanka Kariimka	Wednesday, 12 September 2012 08:18	geesguud	Culima badan oo reer galbeed ah oo kamid ah culimada ku takhasustay culuumta Sayniska, ayaa waxay baaritaan ku samayeen dalka Germany, iyagoo baarintaano caynkaas ah oo kala duwan kusoo sameeyay dhulal kala duwan oo kamida shanta qaaradood ee adduunka. Culimadaasi waxay baxthinayeen hab nolaleedka xasharaadka kala duwan iyo qaababka kala duwan ee ay u noolyahiin. Waxayse baarintaankoodii ugu dambeeyay kusoo saareen waddanka Germanay natiija cajiib ah oo ku saabsan nolasha Qur’aanjada.
Baarintaanno ay u adeegsadeen miqyaas iyo qalab cusub oo casri ah ayay ku ogaadeen in Quraanjadu ay u nooshahay sida dadkii oo kale. Waxay kaloo sheegeen in Quraanjadu ay leedahay boqortooyo iyo maamul iyo kala dambeyn sida dadka oo kale, iyagoo qeexay inay maamusho boqorad (dhedig ah). Waxyaabaha kalee cajiibka ah ee culimadani ay soo bandhigeen ayaa ah in Quraanjadu ay hadasho oo ay ku hadasho luuqad u gaar ah, iyagoo dhagaysta khudbad ay u jeedisa boqoradda Quraanjada.
Waxay kaloo qeexeen culimadu in quraanjadu ay tahay noole aad u taxaddar badan, oo dhulka hoostiisa godadkana ay u samayso sida dhismayaasha dadka oo kale. Godadka ay gasha ayaa lagu sheegay inaanay ahayn godad oo qura, balse ay yahiin dhismayaal cajiib ah oo leh qolal iyo daaro cajiib ah, sida ay culimadu iktishaafeen. Waxyaabaha kalee nolasha Quraanjadu ay culimadaasi ka sheegeen waxaa kamid ah inay Quraanjadu tahay noole cududaar badan, itabadana waxay ka leexdaan meelaha noolaha kale uu maraya ama kusugan yahay haddii ay ogaadaan, ayagoo u cududaaraya si aanay iyagana u dhibin cidna khalad uga dhicin.
Haddaba macluumaadkan iyo baaritaannadani ay sameeyeen culimada aqoonyahannada ah ee reer galbeedka, ayaa waxay boqolkiiba boqol ayideysaa aayado Quraan ah oo Illaahay inooga qisooday (1400 sano kahor) xaaladda Quraanjada markuu inooga warramayay qisadii Nebiyullaahi Sulaymaan. Waxaase mucjiso ah in 114-ta suuradood ee Qur’aanka kariimka ahi mid kamida ay magac kasidata Quraanjada (Suuratun Namli).
Haddaba muxuu Qur’aanku ya yiri xaaladda Qur’aanjada:
Suuratun Namal 18d.
”Illaa ay yimideen (Sulaymaan (CS) iyo ciidamadiisii) toggii Quraanjadu, markaasay TIRI (markaasuu yiri lama oran, cidda wax oranaysa waa mid dhedig ah)Quraanjadi Quraanjooyinoow!! gala GURYAHIINA, yaanay idin burburinin Sulaymaan (CS) iyo ciidamadiisee, ayagoonan IDIN OGAYN.
Haddaba sida macluumaadkan cilmiga casriga laga helay ay caddeyneysa Quraanjadu waa noole sida dadka u nool, aayadda Quraanka ahina sidaas oo kale ayay inoo sheegaysaa. Waxay yiraahdeen Quraanjadu waxay leedahay maamul iyo boqortooya wayna hadashaa. Aayadda Qur’aanka ahi waxay inoo sheegeysaa inay Quraanjadu maamul iyo midnimo leedahay oo ay hadasho. Waxyaabaha ay iktishaafeen ayaa waxaa kamid ah inay u khudbeyso Quraanjo dhedig ah. Aayadda Quraanka ahina waxay inoo tilmaamaysaa in Quraanjada la hadashay Quraanjooyinka kale ay ahayd mid dhedig ah, waayo aayaddu waxay tiri ”QAALAT”, taasoo macnaheedu yahay ”WAXAY TIRI”, ma aanay oran aayaddu ”QAALA”.
Waxay yiraahdeen Quraanjadu waa noole aad u taxaddar badan, waxaa taasi inoo caddeysay aayadda Quraaniga ahi marka ay leedahay Quraanjadu ”QURAANJOOY GALA GURYAHIINA, YAANAY IDIN BURBURININ SULAYMAAN (CS) IYO CIIDAMADIISEE”.
Waxay kaloo culimadu sheegeen in Quraanjadu ay gasho godadka balse halka ay kunooshahay aanay ahayn god oo kaliya ee ay dhisata qolal iyo daara sida dadka oo kale. Waa halka ay aayaddu ka oranaysa ”GALA GURYAHIINA”. Waayo Illaahay markuu inooga qisoonayay Qisadii Quraanjada iyo Sulayman (CS), maanay oran Quraanjada ”GALA GODADKIINA. Bal ee waxay tiri ”Gala GURYAHIINA”. Taasuna waa cilmiga ay imminka heleen, balse innagu aanu helnay 14 qarni kahor.
Waxay culimadani sheegeen in Quraanjadu ay tahay noole cududaar badan, aayadda Qur’aanka ahi waxay inoo sheegeysaa in ay tiri Quraanjadu ‘‘GALA GURYAHIINA,yaanay idin burburinin Sulaymaan iyo ciidamadiisa IYAGOONAN IDIN OGAYN.Waxay Quraanjadu u cududaartay Sulaymaan (CS) iyo ciidamadiisii ayadoo sheegtay inaanan si ula kas ah loo burburinayn, balse ay dhici karta ayagoonan loo dan lahayn in la burbirya. Ma aanay oran dadkani way idin burburinayaan ee GURYIHIINA gala, balse waxay tiri ”Yaanay idin burburinin AYAGOONAN IDIN OGAYN.
Tani waxay ahayd Mucjiso uu Illaahay siiyey Sulaymaan (CS) inuu maqla codka Quraanjada, innagana Illaahay inooga qisooday dhacdadaasi 1400 sano kahor, maantayse ogaadeen culimada sayniska.
MAASHA ALLAH!! Qur’aanku waa mucjisada waarta, waana mucjisada ugu weyn ee Illaahay uu Nebi siiya.